Cibaadada macquulka ah, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna u bixisaan sida allabari nool oo quduus ah oo Ilaah ku farxo. Taasi waa adeegaaga cibaadada caqliga leh » (Warqad ku socota Roomaanka 12,1). Taasi waa mawduuca wacdinta.
Waxaad si sax ah u ogaatay inuu eray ka maqan yahay. soo socda macquul ah Cibaadada, cibaadadayadu waa a macquul . Ereygan waxaa laga soo qaatay Giriigga "caqli gal". U adeegida sharafta Eebbe waa mid macquul ah, macquul ah oo macno leh. Waan sharxay sababta.
Marka laga eego aragtida aadanaha, waxaan ku eegnaa wax walba oo caqli gal ah aadanaha. Tusaale ahaan, hadaan u adeego Eebbe wax uun kama filan karaa. Caqliga Eebbe aad buu u kala duwan yahay. Ilaah wuu idin jecel yahay aniga iyo aniga shuruud la'aan. Adeeg caabudid macquul ah oo ka yimid aragtida Ilaah waa adeeg jacayl innaga aadanaha u baahan, kaas oo aannaan ku kasban karaynin. Oo cibaadadayda? Waa inuu sharfayaa oo keliya Rabbiga Ilaaha ah. Cibaadadayda waa in ay ammaaneysaa isaga oo ay ku dartaa mahadnaq isaga. Bawlos si sax ah ayuu ugu yeedhay adeeggan macquul ah oo macquul ah , Cibaadad aan caqli gal ahayn oo caqli gal ah ayaa sameyn lahayd meine danaha gaarka ah iyo hamigeyga saar safka hore. Waxaan u adeegi lahaa naftayda. Taasi waxay noqon lahayd sanam caabudid.
Waxaad si fiican u fahmi kartaa cibaadada macquulka ah adigoo raadinaya nolosha Ciise. Wuxuu ku siiyay tusaale wanaagsan.
Cibaadada Nolosha ee wiilka Ilaah
Ciise noloshiisa dhulka waxaa ka buuxsamay fikirro iyo ficillo, siinta Ilaah ammaanta keligeed, inuu sameeyo doonista Aabbihiis, iyo inuu innaga adeego aadanaha. Isugeynta rootiga cajiibka ah, Ciise wuxuu si aan caadi aheyn ugu qanciyay gaajada kumanaan qof oo kibis iyo kalluun ah. Ciise wuxuu gaarey dadka gaajaysan inay ka dhex helaan raashin run ah oo weligood ka dhergi doona gaajadooda ruuxiga ah. Ciisena sidoo kale wuxuu ku shaqeeyey mucjisadan si uu idiinka warqabo oo aad u ifiso Ilaah iyo boqortooyadiisa. Rabitaankan isaga ah, wuxuu kugu hagayaa inaad isaga la noolaatid oo aad samaysid waxa ku jira doonista Aabbaha jannada ku jira. Wuxuu ina siiyay tusaale macno leh noloshiisa ficil. Wuxuu u adeegay Ilaah, aabihiis si macquul ah ama si kale, maalin kasta jacayl, farxad iyo qadarin.
Adeeggan macquulka ah ee Ciise wuxuu ka mid ahaa dariiqa uu ku silco dhamaadka noloshiisa. Isagu kuma raaxeysto silica laftiisa, laakiin waxa beddelaya silica uu u leeyahay adeegga macquulka ah wuxuu ku tusi doonaa dad badan. Tani waxay horseeday farxad farxadeed sarakicistiisa adiguna waad ka qaybqaadan kartaa.
“Masiixa, Ciise wuxuu u kacay sidii cunugii hore”, sida ku xusan 1 Korintos 15,23!
Runtii wuu kacay, wuu nool yahay oo maanta ayuu sii shaqeeyaa! Noloshii Ciise, dhimashadii iskutallaabta, sarakiciddiisa, noloshiisa midig ee aabihiis weli waa “cibaadada nool iyo caqliga leh ee wiilka Ilaah” inagu leh aadanaha maanta. Ciise wuu maamuusiyey aabihiis markasta. Ma fahmaysaa tan? Fahamkaani wuxuu bilow kuu yahay is badal weyn.
"Waqtigaas Ciise wuxuu bilaabay oo yidhi: Aabbow, Rabbiga samada iyo dhulkow, waan kugu mahad naqayaa, maxaa yeelay waxaad ka qarisay kuwa caqliga leh iyo kuwa caqliga leh waxaadna u muujisay dadka aan qaan gaarin" (Matayos 11,25).
Haddii aan ka mid noqon lahayn kuwa caqliga leh ee dunida ugu caqli badan, dhib ayaa nagu dhici lahaa. Waxay ku adkaysanayaan xigmaddooda iyo xikmaddooda waxayna hilmaamaan muujinta Eebbe.
Halkan, si kastaba ha noqotee, waxaan ka hadleynaa carruurta yaryar. Waxa loola jeedaa waa dadka qirta inay si buuxda ugu tiirsan yihiin Ilaah isla markaana ku tiirsan yihiin gargaarkiisa oo aan doonayn inay iyagu iskood wax u qabtaan. Si fiican u dheji, carruurta Ilaah jecel yihiin kuwa ugu cadcad. Noloshaada isaga u dhiib. Waxay fahamsan yihiin in Ciise uu noogu adeego aadanaha, qof kasta, noloshiisa oo uu weli na adeego. Waxaan la gaari karnaa waxyaabo waaweyn isaga maxaa yeelay waxaan raacnaa doonista Ilaah oo aan u oggolaannaa xooggiisa inuu inagu dhex shaqeeyo.
Tani waxay ka dhigan tahay haddii aadan ogolaan naftaada inuu Ilaah u adeego sida uu adiga kugu siiyo noloshaada, weli ma aadan gaarin da'da dadka laga tirada badan yahay, gebi ahaanba waxay isaga ku tiirsan tahay. Waxaad liidataa rabitaankii inay is-hoosaysiiyaan isaga oo diyaar u ah inuu u adeego geesinimo. Jacaylkiisa jacayl ee uu kuu muujiyo, adeegyadiisa macquulka ah ayaa ku gabyi lahaa oo kaa gudbin lahaa adiga oo aan cod lahayn.
Waxaad sugeysaa Ciise inuu kula hadlo adiga shaqsiyan. Waan ku kalsoonahay inaad maqli doontid wicitaanka Ilaah. Isaga oo adeegsanaya nimcada cibaadadiisa caqliga leh, wuxuu kugu jiidi karaa qof walboo aabbuhu ugu yeedho. Si tartiib ah, sida cod dabayl ama gariir rabshad leh, waxaad maqashaa codkiisa. Waxaan u nimid qodobka labaad.
Haa nafteena qaaliga ah iyo aniga mar labaad. Ma doonayo inaan qof yar ka dhigo bayaankan. Waa xaqiiqo in midkeen kasta, isagoo aan ku faanin, uu yahay qof naftiisa jecel. Mid yar ama mid weyn. Mid, sida Bawlos ku leeyahay Efesos 2,1, wuxuu ku dhintay dembiyadiisa. Ilaah baa mahad leh, isagu aniga iyo adiga ha idinka maqlo codkiisa. Kaliya cibaadadiisa caqli gal ah ayaa laga sii dayn doonaa dambiga iyo culayska dembiga, oo la badbaadiyo.
Waxaan maqlay codkiisii ​​sidii ilmo yar oo hooyaday ah. Waxay codkii Ciise wejiga iyo qalbi ka siisay. Markii dambena waxaan maqlay codkiisa wadada qaldan, ilaa iyo meeshii, shaqsi daneysi ah, oo sida muuqata ka go’ay dhammaan niyad-wanaagga, waxaan ku socday waddada doofaarka wiilka wiil-yaraanta ah oo isaga u keenay murugo. Taas macnaheedu waa:
Waxaan is iri, naftayda waan hubaa oo uma baahna sacab ama canaan midna. Waxaan raadinayay aqoonsi. Si aan u shaqeeyo habeen iyo maalinba si aan u quudiyo reerka, laakiin waxaa sii dheer in la i siiyo wax ama wax kale oo qalbigayga ka dhigtay inuu damco. Dabcan, had iyo jeer leh sabab sax ah.
Waxba ma i gariiri karaan. Eebbe mooyee! Markii uu muraayadda ii qabtay, wuxuu i tusay sida aan ugu ekaa aragtidiisa. Wasaqda iyo duuduubyada Waxaan ka ganacsadey waxyaabahaas oo kale. Waxaad tahay qof aan wax caddayn karin. Rabbi Ciise wuu i jeclaayay inkasta oo qaldamahan jira. Wax intaa ka badan oo aan ka yarayn. Codkiisu wuxuu i beddelay noloshayda. Habeenkii, ka dib shaqada, oo akhrinaya Kitaabka Quduuska ah, iyo inta lagu jiro maalinta shaqada, ayuu si tartiib ah gacanta ugu qabtey gacantayda, wuxuu igu hanuuniyey inaan beddelo noloshayda sida cibaadada macquulka ah. Ka fogow qaab nololeedka caadiga ah iyo diiwaangelinta lacagta kaashka ah, oo ka fog ballan qaadista xiisaha xirfadeed ee dhammaan noocyada cuntooyinka kala duwan, oo aan ka fogaan karin waxyaalaha aan ku filnayn. Waan dhintay! Dhamaanteen waxaan heysanaa nooc “wasakh usha ah” waxaan rajeyneynaa inaan wax uun ku dhaafno. Sidan ayay u egtahay sida nafteennu u ekaato, gaagaaban, si kale haddii loo dhigo, dhammaanteen waxaan ku dhimannay xadgudubkeenna (Efesos 2,1). Laakiin Ilaahay baa adiga iyo aniga keenaya oo aan ku qanacno waxa aan haysanno iyo waxa uu na hoggaaminayo in aan qabanno. Waxaad la kulmi doontaa marka ugu horeysa wixii isbeddelada adeegga macquulka ah kuu horseedaa.
Adeeggeyga macquulka ah
Waxay ku qorantahay Waraaqda dadka Roomanka. Isaga oo raacaya jihada Ruuxa Quduuska ah, Bawlos wuxuu qoray cutub ka kooban kow iyo toban cutub ka hor inta uusan u beddelin ficil ahaan cutubka 12, oo leh xaalad deg deg ah oo aan muuqan.
Aayaddani waa digniin waxayna khusaysaa halkan iyo hadda. Ma joojin karno codsiga hadda. Waxay ku saleysan tahay kow iyo toban cutub. Kuwaani waxay muujinayaan sida Eebbe kuuugu adeego. Marka laga eego aragtidiisa, macquul ahaan - shuruud la'aan. Wuxuu doonayaa inuu taas gaaro Naxariistiisa, naxariistiisa, naxariistiisa, waxaas oo dhan waa hadiyad aan u qalmin inuu kugu hoggaamiyo isbedelka xag-jirka ah ee noloshaada Waxaas oo dhan waad ku heli kartaa ciise keliya. Qaado hadiyaddan. Tani waxay quduus kaa dhigi doontaa, taas oo ah, inaad adigu iska leedahay xagga Ilaah isla markaana aad nolol cusub isaga la noolaatid. Tani waa cibaadadaada caqliga leh, macquul ah. Sidoo kale shuruud la'aan, oo keliya sharaftiisa, oo ay la jiraan dhammaan fikradahaaga iyo ficiladaada.
Masiixiyiinta Masiixiyiintu waxay khatar ku jiraan markasta iyagoo markhaati u ah caqiidadooda in la silciyo oo la dilo. Laakiin taa kaliya maaha, laakiin waa lagu jeesjeesaa sida kuwa raacsan dhaqanka, waana lagu jees jeesaa si gaar ah oo cibaado leh oo la faquuqo nolosha shaqada. Waa run murugo leh. Bawlos halkan ayuu kula hadlayaa Masiixiyiinta, Kuwaasoo cibaadada ku sameeya noloshooda, iyo jidkooda jacaylka ah.
Sideed uga sii caqli badnaan kartaa. u egtahay cibaado macquul ah?
Taasi ma su’aal wanaagsan baa? Bawlos jawaab buu naga siinayaa:
«Nafsaddaada ha saarin adduunkan, laakiin naftaada u beddel naftaada adigoo cusboonaysiinaya maskaxdaada si aad u tijaabiso waxa doonista Ilaah yahay, oo ah wanaagga iyo wanaagga iyo kaamilnimada» (Rooma 12,2).
Waxaan la kulmay cibaadada macquulka ah halkaas oo aan u oggolaado Ciise inuu noloshayda tallaabo tallaabo tallaabo. Ilaah wuxuu inaga samatabbixiyaa dhimashada, laakiin in yar, isagu wuu kaaga wada badbaadin doonaa naftaadii hore. Ma dhacdo habeennimo.
Waxaan hadda si taxaddar leh u bixinayaa tallaabooyinkan yar ee aan ku kobcin karo saaxiibtinimada iyo soo-dhowaynta. Meesha aan haysto wakhti aan ku dhageysto waxa aad rabto inaad ii sheegto, halkaas oo aan kugu caawin karo oo aan kugu raaco masaafo dheeri ah. Waxaan si iskiis ah iskaga casilay noloshaydii hore waxaanan ku raaxeysanayaa waqtigayga saaxiibkey, Ciise.
Xaaskeyga qaaliga ah, caruurtayda iyo ayeeyooyinka waa in aan la iloobin sidoo kale. Waxaan hadda leeyahay dhego furan oo dheeri ah iyo qalbi furan oo ku saabsan waxa ay ka rajeynayaan iyo waxa ay ka walwalaan. Waxaan arkaa baahiyaha deriskayga si ka wanaagsan.
« Ka taxadar baahida quduusiinta . Ku tababbaro martida » (Rooma 12,13).
Jumlad yar - tartan weyn! Waa adeeg macquul ah , Taasi waa shaqadayda. Waxaan isaga riixi karaa naftiisa isaga raaxo ahaan, caqli galnimada aadanaha. Gunaanad macquul ah oo tan laga helayo waxay noqon laheyd: Maan oofin howlihii caabudkeyga caqliga lahaa, waanan nacday doonista Eebbe oo mar labaad nafsaddayda isku aaday ayaan isla qaatay.
Gunaanad kale oo macquul ah: Ma dhihi karo howshan waxaa loo sameeyaa si fudud oo dhaqso ah. Siduu Ciise kuhelay beerta Gethsemane. Markuu dhididaa oo dhididkiisu dhididku wuxuu dareemay dhiig. Ka taxadar baahida quduusiinta. Ku celceli martida. » Tani maahan wax fudud, qabasho la'aan, waa adeeg cibaado macquul ah oo kaxeeya dhididkayada. Laakiin haddaan fiiro gaar ah u yeesho isbedelka noloshayda, waxaan rabaa inaan naftayda ku aqbalo qalbigayga oo dhan, jacaylka aan u qabo baahiyaha dadka kale. Isbeddelkeygu weli ma dhammaan. Ciise wali waa ila shaqeeya oo waan ku faraxsanahay inaan ku ammaani karo Ilaah siyaabo kala duwan.
Malaha waxaad la mid tahay Ciise oo jooga beertii Gethsemane. Ciise wuu tukaday oo weydiiyey xertiisii ​​ugu dhawaa:
U soo duceeya inaydnaan jirrabaadda gelin. (Luukos 22,40).
Salaad la'aan, xiriir dhow oo lala yeesho Ciise, waxyaabaha si fiican u hagaagi maayaan. Soo-martigelinta, cibaadada macquulka ah waxay noqon kartaa dariiqa adkeynta ee aniga iyo aniga oo aan ku ekaanin oo keliya inaad liqdo malab. Sidaa darteed duco joogto ah si aad u hesho xigmad, hanuun iyo xoog waa muhiim, sida ku qoran Rooma 12,12 dhamaadka. Bawlos waxa kale oo uu xusay qodob kale:
Midnaba shar shar ha ugu celinina. U roonow qof kasta. Hadday suurtagal tahay intaad tahayba, nabad ku wada hel qof kasta » (Rooma 12,17-18).
Waxay la nool yihiin deriskooda. Waxay ku siinayaan tuubooyin ganaax ah oo wax u dhinta xudunta. Waxaa kugu adkaan kara inaad cafiiso. Wadnahaagu wuu xanuunsanayaa! Haddii aadan cafin oo aad cafis weydiisato, wadnahaagu wuu dhaawici doonaa sannado iyo tobannaan sano. Waa lagu weydiinayaa Ciise ku caawi, magiciisa, inaan ku cafiyo salka qalbigayga hoostiisa, oo aan wanaagga dib ugu celiyo wanaagga! Haddii kale noloshaada ayaad ku adkayn doontaa oo aad u xanuun badan doontaa maxaa yeelay naftaada kama xorayn kartid xaga hoose. - Waan cafiyey, marka waxaan abuurayaa nabad. Aniga si shuruud la’aan ah ayaan ku qaataa talaabadan koowaad! Idaha Ciise idhihiisu cod bay maqlaan. Waxaad ka mid tahay. Waxay eryanayaan nabadda, sida cibaadada macquulka ah,
Ciise wuxuu dhulka u yimid inuu si shuruud la'aan ah kuugu adeego jacaylka. Cibaadadiisa waa kaamil. Wuxuu ku noolaa nolol qumman iyadoo la raacayo doonistii aabbihiis. Waxa doonista Eebbe waa wanaagsan yahay, oo wacan, oo kaamil ah. Ciise wuxuu doonayaa waxa adiga kuu wanaagsan.
Jacaylku ha kuu hanuuniyo inaad u dhaqanto sida Ciise ugu fikiray noloshaada. Tani waa adeeg macquul ah, shuruud la'aan ah iyo jawaabta Eebbe ka rajeeyo carruurtiisa uu jecel yahay. Oo waxaad u adeegtaa Ilaaha keligiis ah, oo isaga ammaan iyo mahadnaq u sameeya, oo waxaad deriskaaga u adeegtaa. Rabbi ha kuugu barakeeyo cibaadadaada macquulka ah.